Posted by editor on July 28, 2011 Comments
Amnesty International oo ku eedeesey ciidanka Ivory Cost in ay ka hor istaagaan dadka in dalkooda dib ugu soo laabtaan
London:- Hay’adda u dooda u xuquuqda aadanaha Amnesty International ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa ku eedeesay ciidamada xukuumadda iyo Malaeeshiyaatka ivory cost in ay ku abuuraan argagax iyo cabsi dadka doonaya in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan ee ka cararay xilligii rabashadaha ka qarxeen dalkaas kadib khilaaf ka dhashay natiijooyinkii doorashadii kadhacday dalkaas dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay.
Bayaan ka soo baxay xafiiska Amnesty international ayaa lagu sheegay in dadkii ka barakacay rabashadihii kadhacay Ivory cost ay doonayaan in dalkooda dib ugu laabtaan balse aysan awoodin sababo la xiriira dhibaatada oo taagan, taasi oo keentay in la waayo amaan iyo degnaansho.
Amnesty ayaa ku eedeysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaatka ka kooban tobnaan (Duusu) ama u gaarsatada in ay si ula kac ah u dilaan dadka islamarkaana ay dadka u diidaan in ay ka baxaan xeryaha ay sida KMG ah u degan yihiin.
Amnesty waxa ay tilmaamtay in xaaladaha ka taagan hadda dalka Ivory cost ay sababeen in in ku dhow nus malyan qof in aysan awoodin in ay dalkooda dib ugu laabtaan.
Amnesty ayaa ugu baaqday maamulka ivory cost in uu u dhaqaaqo sidii arrimahaas wax u qaban lahaa islamarkaana uu u kala fur furi lahaa maleeshiyaatkaas dadka cabsida iyo argagaxa ku beeraya.
Pakistan iyo India oo wadahadal ka yeeshay xiriirka labada dal
New Delhi:-xukuumadaha India iyo Pakistan ayaa muujiyey sida ay ugu rajo weyn yihiin in ay hagaajiyaan xiriika laba geesoodka ah ee u dhexeeya labada dhinac iyo furitaanka bog cusub xiriirkaas.
Labada dhinac ayaa balan qaaday in ay soo afjaraan qalalaasaha gobolka.
Wasiirka arrimaha dibadda India ninka lagu magcaabo Asaam Karishna iyo dhigiisa dalka Pakistan haweenayda lagu magcaabo Xanaa Rabaani Kahaar oo kulan ku yeeshay New Delhi ayaa kulankooda diirada ku saaray sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka u dhxeeya labada dal iyo arrimaha gobolka Kashmir.
Labada mas’uul ayaa ku nuuxnuuxsaday in aysan labada dhinac diyaar u ahayn in ay markale dagaal dib ugu laabtaan.
Karishna oo hadlay kadib kulanka uu layeeshay dhigiisa Pakistan ayaa waxa uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo India uu hadda uu ku taagan yahay wadadii saxda ahayd, islamrkaana labada dal ay ku heshiiyeen in la fududeeyo qaar kamid ah xeerarka ganacsiga iyo socdaalka labada dhinac.
Kahaar oo ah wasiirka ugu da’da yar wasiiradii arrimaha dibadda Pakistan ayaa sheegtay in xiriirka dibada labada dal uusan u xirnaan doonin wax horey u dhacay, balse hadda ay kala kulantay dowladda India mowqif wax ku ool ah.
Kahaar ayaa u gudbisay ra’iisal wasaaraha India ninka lagu magacaabo Maan Mohaan Singi casumaad uga timid dhigiisa dalka Pakistan ninka lagu magcaabo Yuusuf Ridaa Jeylaani in uu booqasho ku yimaado dalka Pakistan.
Al-dawaahiri oo amaanay dibad baxayaasha Syria islamrkaana ku tilmaamay Asad in uu yahay waardiyaha Yuhuuda
London:- Hogaamiyaha cusub ee ururka Al-qaacidda Ayman Al-dawaahiri oo cajilad Video cusub soo duubay ayaa taageeray mucaaradka iyo dibadbaxayaasha Syria, wuxuuna ku tilmaamay dibadbaxayaashu in ay yihiin Mujaahidiin.
Dawaahiri waxa uu intaas ku daray in Mujaahidiinta ay barayaan kuwa xadgudba iyo Khaa’iniinta cashar ayna hor ka hor iamaanayaan caburinta.
Dawaahiri waxa uu tilmaamay in taageerayaasha Al-qaacida ay suurtagal tahay in ay ku biiraan shacabka Syria ee ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Bashaar Al-asad.
Warbixinada qaarkood ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay mudaaharaadyada Syria ay gaarayaan kun afar boqol sideetan iyo lix qof ayna barbar socoto 12 kun oo xabsiga la dhigay.
Xarunta xuquuqda aadanaha Syria ayaa sheegtay in ciidanka amaanka iyo milatariga ay dileen arbacadii 11 rayid ah kadib markii ay xoog ku galeen deegaanka lagu magcaabo Kanaakir ee ku taala koonfurta galbeed caasimadda DImishiq.
Xarunta oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in afar taangi iyo cagagaf ay galeen degmada oo 30 km dimishiq halka 14 kale oo taangiyo ah go’doomiyeen.
Dadka deegaanka ayaa dhagaxaan ku tuuray islamrkaana shiday taayarada gawaarida iyagoo isku dayaya in ay hor istaagaan in ciidanka ay soo galaan iyagoo ku dhawaaqay Allahu Akbar.
Kuwait oo ku gacan seertay dalab uga yimid ciraaq oo ku aadan joojinta dhisitaanka deked lagu magcaabo Mubaarak
Kuwait:- Kuwait ayaa ku gacan seertay dalab rasmi ah oo ay xukuumadda ciraaq u soo gudbisay oo ku aadan in ay joojiso dhistaanka dekeda Mubaaraka ee laga dhisayo jasiiradda Boobyaan ee ku taala woqooyi galbeed gacanka oo u dhow xadka ay la wadaagto ciraaq sida ay sheegtay wakaaladda wararka Kuwait.
Mas’uul katirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kuwait ayaa sheegay in dalbakaan uusan ku tiirsanayn qaanuun ama deegaanka.
Kuwait ayaa sheegtay in dekeda ay ku dhisayso iyadoo u eegaysa qaranimadeeda, dhulkeed iyo biyaheeda.
Toddobaadkii hore Bayaan ay soo saartay Koox cusub oo isku magacowday Xisbullah ayaa looga digay dhamaan shirkadaha ka shaqeeya mashruuca dhisitaanka Dekeda Mubaarak ee dalka Kuwait in ay sii wadaan howlaha ay ka hayaan halkaas.
Bayaan-ka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri “ Shacabka ciraaq ma ilaabi doono waxa xukuumadda Kuwait ay wado oo ay kamid tahay dhisitaan dakad si dhaqaalaha ciraaq loo cunaqabateeyo”.
Xukuumadda ciraaq ayaa codsatay in la joojiyo dhisitaanka Dekeda Mubaarak ee dalka Kuwait taasi oo hadda maraysa heerka shaqadeeda 14%, sida uu sheegay wasiirka gaadiidka dalka ciraaq ninka lagu magcaabo Haadi Al-caamiri.
Shirkadda Hyundai ee laga leeyahay dalka Kuuriyada koonfureed ayaa wada mashruuca dhisitaanka dekeda Mubaarak ee dalka Kuwait.
Xiriirka Dalalka ciraaq iyo Kuwait oo ahayd albaabkii ay ciidamada mareykanka u soo mareen ciraaq 2003, ayaa sanadihii ugu dambeeyey laga dareemayey in uu soo hagaagayey.
Ciraaq ayaanan si rasmi ah u aqoonsan xuduuda Kuwait dhanka badda iiyo bariga .